Rivodoza Nargis tany Myanmar herintaona taty aoriana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Mey 2009 19:33 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Français, Español, Italiano, 繁體中文, 简体中文, македонски, bahasa Indonesia, English
Nandravarava ny faritra atsimon'ny vinany (Delta) Irrawaddy ny rivodoza nahafaty olona iray tamin'ny volana mey 2008 ka mihoatra ny 2 000 000 ny tra-boina tamin'izany. Notombanana fa 138 000 ny isan'ny maty ary 200 000 no tsy hita popoka tamin'iny fandalovan'ity rivodoza ity. Herintaona taty aorian'ny voina navelan'ny rivodoza Nargis, dia mbola mijaly ireo sisa niangana ary tsy mandeha ilalana ihany koa ny ezaka fanorenana indray. Mbola ilaina ny fandraisana anjaran'(ny malala-tanana) hamonjena ireo sisa-patin'ny rivodoza.
Maro amin'ireo tra-boina ireo no tratran'ny fahakiviana lalina saingy ny 11% ihany no mahazo fikarakarana ara-pahasalamana. Mihoatra ny 40%n'ny tsy manan-kialofana no ankizy; ary maro amin'izy ireo no mora andairan'ny tazo sy ny fahasarota-pisefoana (pneumonia).
Misy ny velovelom-poana amin'ny alalan'ny fihazana voalavo sy biby hafa any an-tsaha. Nisy koa nitatitra fa niakatra ny tahan'ny fivarota-tena eny amin'ny vinany noho ny fiharatsian'ny toe-karena.
Mihoatra ny atsasa-manilan'ny sisa niangana no mbola miankina amin'ny fanampiana ataon'ny malala-tanana. Lasa olana lehibe ho an'ny mponina manodidina ny vinany ny fitrosana:
Voalazan'ny tatitra ihany koa fa nandritra ny fahatsiarovana ny herintaonan'ny rivodoza Nargis, dia tratran'ny sivana ampiharin'ny Sampam-panjakana manaramaso ny haino aman-jery ny lahatsoratra miresaka ny zavamisy marina any amin'ny toerana tratran'ny rivodoza.
Mitaky ny mangarahara amin'ny fitondrana momba ny fanampiana ataony any amin'ny faritry ny vinany Vondron'ny Naman'i Burma. Mitaky ihany koa izy ireo ny hanafahana ny gadra politika izay nofonjaina satria nikarakara asam-pamonjena voina tamin'ny herintaona:
Na dia eo aza ny ezaka fiaraha-miasa ataon'ny vondrona iraisam-pirenena hanampiana an'i Myanmar, dia tsy mifanaraka amin'ny ilaina ny fanampiana vita. Notombanan'ny Firenena mikambana fa mihoatra ny US$691 000 000 no ilaina hamitana ny famonjena voina.
Nomarihan'ny mpandinika fa kely dia kely ny fanampiana natokana ho an'i Myanmar raha oharina tamin'ny nataon'ny firenena maro nandritra ny voina navelan'ny Tsunami tamin'ny 2004. US$300 000 000 no noraisin'i Myanmar, nany 2.5%n'ny lany nandritra ny tsunami tamin'ny 2004.
Mitaraina noho ny fahasarotana mahazo azy ireo ny mpiasan'ny fanampiana rehefa mitatitra ny fanampiana any Myanmar:
Edward Hew avy ao amin'ny Sampan'asam-pamonjena MERCY Malaysia no manoratra ny momba ny tetikasam-pananganana any Myanmar amin'izao fotoana izao
Raha te-hahita ny vaovao farany momba ny androm-pahatsiarovana ny rivodoza Nargis ianao dia tsidiho ireto vohikala manana pejy manokana ny toe-draharaha teny amin'ny vinany (Delta): The Irrawaddy, Mizzima, ary ny A Diary of the Cyclone Nargis.